भारतले नेपालमा आउने सिटामोलमा ज्यानमारा भाईरस “Machupo” मिसाएको सनसनीपूर्ण खुलासा, यो सिटामोल प्रयोग नगर्न विज्ञको चेतावनी ! - Daily Lokmandu
Homeसमाचारभारतले नेपालमा आउने सिटामोलमा ज्यानमारा भाईरस “Machupo” मिसाएको सनसनीपूर्ण खुलासा, यो सिटामोल प्रयोग नगर्न विज्ञको चेतावनी !
August 9, 2018 समाचार Comments Off on भारतले नेपालमा आउने सिटामोलमा ज्यानमारा भाईरस “Machupo” मिसाएको सनसनीपूर्ण खुलासा, यो सिटामोल प्रयोग नगर्न विज्ञको चेतावनी !
त्यसैले उद्पदक लाई सन्चो हुन खाने औषधि नै दुखाईको कारण बनेको छ ।भारतीय औषधि उद्पदक कम्पनि Apex Laboratories Private Limited ले बजारमा ल्याएको “P-500
अहिले पनि कति फेसबुक र अरु सामाजिक संजाल मार्फत यस विषयमा म्यासेजहरु पठाउने काम भै रहेको छ । सो म्यासेजमा उल्लेख भए अनुसार “P/500” नामक उक्त प्यारासिटामोल बजारमा नया आएको र धेरै सेतो अनि टल्किने खालको रहेको र सेवन नगर्न भनिएको छ ।
जसमा विश्व कै खतरानाक र ज्यानमारा “Machupo” भाइरस पाइएको भनिएको छ । जसको सेवन ले मानिसको ज्यान सम्म जाने भनिएको छ । सामाजिक संजालमा प्रचार भै रहेको यो हल्ला तल देखाइए अनुसार छ ।
यस्तो भाइरसहरु औषधिमा बच्न सक्ने भए पनि लामो समय सम्म सुख्खा ठाउँमा रहन नसक्ने बिषेशाग्यहरु बताउछन् । जस्ता सुकै हल्लाहरु आए पनि हल्लाको पछि नलाग्नु होला । सानो तिनो बिरामी भनेर कहिले पनि हेलचेक्र्याइँ नगर्नु होला
डाक्टरको परामर्श बिना कुनै पनि औषधि सेवन नगर्नु होला । जथाभावी सेवन बाट हुन सक्ने खतराबाट बच्नु होला । यो समाचार माथि उल्लेखित औषधि सेवन गर्नको लागि सिफारिस गर्नको लागि नभई यस सम्भंधि बजारमा चलेको हल्लालाई केलाउने सानो प्रयास गरिएको हो । थप जानकारीको लागि तल दिएको लिंकहरु हेर्नु होला ।